Waxaa lagu eedeeyay inuu guursaday gabar 14 sano jir ah: danbigii ayaa lagu waayay. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Waxaa lagu eedeeyay inuu guursaday gabar 14 sano jir ah: danbigii ayaa...
Waxaa lagu eedeeyay inuu guursaday gabar 14 sano jir ah: danbigii ayaa lagu waayay.
Maxkamada racfaanka gobolka Møre og Romsdal ee dalkan Norway ayaa danbi ku weyday 29 sano jir u dhashay dalka Ciraaq, kaas oo ku eedeysnaa inuu guursaday gabar 14 sano jir ah. Ninkan ayaa ku eedeysnaa inuu jabiyay xeerka iyo sharciga guurka Norway, kadib markii uu guursaday gabar ay da´deedu ka hooseyso da´da qaangaarka ee 18-ka sano.
Horey maxkamada hoose ayaa ninkan ku weyday wax danbi ah, waxeyna Maxkamada racfaanka mar kale ninkan ka cafisay dhamaan eedihii loo heystay. Maxkamadu racfaanka ayaa si lamid ah maxkamada hoose go´aankeeda ku sababeysay inaan la xaqiijin karin da´da rasmiga ah ee gabadha uu ninkan guursaday, iyada oo horey uu muran uga taagnaa da´deeda rasmiga ah xiliga uu guurkan dhacayay.
Xarunta xaqiijinta aqoonsiyada ayaa iyadna sheegtay inaan la xaqiijin karin ama lagu kalsoonaan karin cadeynta dhalashada ee laga soo diray wadanka ay gabadhan u dhalatay.
Guur taabacsan dhaqanka islaamka:
Ninkan ayaa sida ay xeer ilaalintu sheegtay, gabadha gacanteeda weydiistay qoyskeeda, wuxuuna ka helay ogolaansho ah iyo aqbalaad ah inay gabadhooda siiyeen. Kadib waxaa u meheriyay wadaad muslim ah oo masaajid imaam ka ahaa. Sanad kadib ayay dhigteen xaflad aroos, iyaga oo casuumay xubnaha qoyskooda iyo asxaabtooda gaarka ah.
Xiliga uu guurkaas dhacay ayay xeer ilaalintu sheegta, in da´da gabadha ay u dhaxeysay 14 ilaa 16 sano, halka da´da ninkana ay kor u dhaafeysay 25 sano. Gabadha iyo ninkaba waxey Norway qoxootinimo kusoo galeen sanado kahor.
Kadib markii ay arintan soo shaaxbaday, xeer ilaalinta gobolka Møre og Romsdal ayaa ninkan ku eedeysay inuu jabiyay xeerka iyo sharciga guurka, isaga oo muteysan karay sadex sano oo xabsi ah, hadii danbiga lagu eedeeyay lay maxkamadu ku heli laheyd.
Xigasho/kilde: Frifunnet i sak om barneekteskap.
Previous articleFrp: Ma dhacdeen in qoxooti fursad cusub la siiyo, hadii aan joogi laheyn.
Next articleShirkad Barnevernka la shaqeyso ayuu lahaa: Wuxuu ku xadgudbay caruur gurigiisa kunool.
Akhri: Awaamiirtan ayay dowladu kusoo rogtay Oslo iyo degmooyinka ku xeeran.
Norway: Labo(2) qof oo u dhintay nooca dhalan-rogmay ee feyruska Corona-virus
Canada: Soomaalidu ma ahan madow asali ah: Fal-celin oo laga muujiyay.
Keydka NorSom Velg måned januar 2021 (47) desember 2020 (50) november 2020 (67) oktober 2020 (75) september 2020 (54) august 2020 (82) juli 2020 (54) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (77) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (61) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (39) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (110) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)